एक कोरोनाको संक्रमितले तीन जनाभन्दा बढीलाई सार्नसक्छ - Jhilko
एक कोरोनाको संक्रमितले तीन जनाभन्दा बढीलाई सार्नसक्छ
२२ जनवरी २०२० मा संसारभरिमा कोरोना भाइरसको संक्रमितको संख्या केवल पाँच सय ८० थियो । ६ मार्चमा यसको आँकडा एक लाख दुई हजार ५० पुग्यो । पछिल्ला १२ दिनमा अर्थात् १८ मार्चमा संक्रमितको संख्या संसारभरिमा दुई लाख नाघ्यो । के स्पष्ट भएको छ भने मान्छेहरुसँगको घुलमिलका कारण कोरोनाको संक्रमण धेरै तीब्र बनेको छ ।
अस्टेलियाली नेशनल युनिभर्सिटीका प्रोफेसर नाइल्सले आफ्नो किताव मोडलिंग टु इन्फार्म इन्फेक्सियस डिजिज कण्टोलमा यस विरामीसँग बच्नका लागि निश्चित दूरीमा रहनु सबैभन्दा बलियो हतियार बताएका छन् । उनको दावी छ कि यदि २५ प्रतिशत मान्छेले भेटघाटमात्र आधा गरिदिने हो भने संक्रमणको असर ८१ प्रतिशतसम्म कम गर्न सकिन्छ । अमेरिकाको रोग नियन्त्रण र रोकथाम केन्द्रले ५० वा त्यसभन्दा बढी जनता एकीकृत हुन रोकेका छ । नेपाल सरकारले पनि २५ जनाभन्दा बढी एकीकृत नहुन उर्दी जारी गरेको छ ।
एक रिपोर्टका अनुसार २५ प्रतिशत कोरोना संक्रमणका विरामीलाई यो थाहा थिएन कि यसको प्रभाव यति धेरै हुन्छ भनेर । त्यसैले उनीहरुलाई थाहा नभई मान्छेलाई यो रोग सारिदिइ रहेका छन् । बच्चाका सम्बन्धमा यो अझै धेरै चिन्ताजनक हो कि ठूलाको तुलनामा यसको लक्षण धेरै ढीलो गरी आउँछ । मान्छेको धेरै सम्पर्कमा आएर हुनसक्ने संक्रमणबाट बच्नका लागि सामूहिक कार्यक्रम बन्द भएको छ ।
कोरोना भाइरसबाट संक्रमित व्यक्तिले औसतमा ३.३ जनालाई संक्रमित गरिरहेका छन् । यस संख्यालाई भाइरसको रिप्रोडक्टिभ नम्बर पनि भनिन्छ । युभिर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया सन फ्रान्सिस्कोका महामारीका विशेषज्ञ डा. जेफ मार्टिनले यो रिप्रोडक्टिभ नम्बर जसरी बढ्छ, विरामी पनि त्यसरी नै फैलिन्छन ।
डा. जेफ मार्टिन भन्छन, यस भाइरस संक्रमणका चार कारण छन् । पहिलो, मान्छेमा भाइरस कति धेरै संक्रमित हुनसक्छ । दोस्रो, मान्छेमा कति छिट्टै संक्रमण हुनसक्छ । तेस्रो, मान्छेहरु एकआपसमा कतिको भेटघाट हुन्छन र चौथो, मान्छे कति समयसम्म एकआपसमा भेटघाट गर्छन । पहिला दुई कारण त भाइरसको स्वभावमाथि निर्भर हुन्छ तर अन्तिम दुई कारण चाहिं हामी मान्छेसँग भेटघाट कम गरेर खत्तम गर्न सक्छौं ।
बाध्यताले वाहिर जानैपर्ने भएमा मान्छेहरु तीनदेखि छ फिटसम्मको दूरीमा रहनका लागि विज्ञहरुको सल्लाह छ । डब्लुएचओले एक मिटरको फरक दूरीमा रहन भनेको छ । घरमा नै बसिरहनका लागि जरुरी छैन । तर मान्छेसँग निश्चित दूरी बनाएरर बस्न आवश्यक छ । सार्वजनिक यातायातमा यात्रा नगर्ने, जरुरी काम छैन भने यात्रा नै नगर्ने । घरबाट नै काम गर्ने, सार्वजनिक समारोहमा नजाने । मान्छेले जति आफ्नो सम्पर्क घटाउँछन् त्यति नै यो संक्रमणको खतरा कम हुन्छ । घरमा अनावश्यक आवतजावतका लागि पनि मान्छेहरुलाई कम गराउने । बच्चाहरुलाई वाहिर खेल्न जान नदिने । बच्चाहरुले हातबाट अनुहारमा हात लगिरहने भएकाले हातमा स्यानेटाइजर लगाइदिइ रहने । बूढाबूढीलाई बजार जानबाट रोक लगाउने । वाहिर हिंड्दा मोबाइलको प्रयोग एकदम कम गर्ने । त्यसलाई बेलाबेलामा स्यानेटाइजर लगाइरहने । मोबाइलबाट पनि कोरोना सर्नसक्छ ।
अमेरिकन एकेडेमी अफ पिडियाटिक्सका एक अध्ययनका अनुसार चीनमा दुई हजार एक सय ४३ बच्चालाई कोरोना भाइरस पाइयो । त्यसमा १३ प्रतिशतलाई लक्षण नै देखिएन । निश्चित दूरीमा साना बच्चालाई राख्नु जरुरी छ । भाइरस संक्रमण हुने वित्तिकै लक्षण पनि नदेखिन सक्छ । बच्चालाई खेल्न वाहिर जान नदिने र नातेदारको घरमा जानआउन नदिने गर्नुपर्छ । यसबेला उनीहरुलाई स्यानेटाइजरको प्रयोग र सरसफाइमा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ ।
एक संक्रमित व्यक्ति यदि सामान्य भेटघाटमा रहन्छ भने उसले पाँच दिनमा २.५ व्यक्तिलाई विरामी बनाउन सक्छ । जसबाट ३० दिनमा चार सय छ जना विरामी बनाउन सक्छ । एजेन्सीको सहयोगमा
सबै राजनीतिक दल, संघसंस्था, नागरिक समाज, आमसञ्चारमाध्यम र समस्त नेपालीलाई अध्यादेशविरुद्ध...